BEWARE! The average CV of Myanmar Job seeker contains more lies than you'd ever imagine ﻿
BEWARE! The average CV of Myanmar Job seeker contains more lies than you'd ever imagine
Tags: jobs in Myanmar work in Yangon Mandalay jobs Myanmar jobs job experts aptitude test career i
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပါတနာပြုလုပ်ထားသော ( Executive Search- ES ) ကုမ္ပဏီသည် ၂၀၁၅-၂၁၀၆ အတွင်း အင်တာဗျူးရာတွင် ဝန်ထမ်းများကို ကျွနု်ပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများအားအကဲခတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲ အသစ်( Candidate Assessment Software) ကို အသုံးပြု၍ စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ ၄င်းပေါ်တွင် အခြေခံ၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မှန်ကန်စွာဖော်ပြထားခြင်းမရှိသည့် CV များပျံနှံ့မှုနှင့်ပက်သက်ပြီး စာရင်းအချို့ကို ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ စာရင်းများတွင်မြန်မာနိုင်ငံရှိအလုပ်ရှာဖွေသူများသည် မှန်ကန်မှုမရှိသော ယုံကြည်မှုမရှိသော အုပ်စုတွင် ပါဝင်နေသည်ကို ပြသနေပါသည်။ ထပ်လောင်းတင်ပြပါက သူတို့သည် မမှန်ကန်သော အချက်အလက်များ ၊ အတည်ပြုချက်မရှိသော အချက်အလက်များကို သူတို့၏ CV တွင် ထည့်ထားကြပါသည်။အလုပ်ရှာဖွေသူများသည် သူတို့၏အရင်ကရှိသည့် သင့််လျော်သောအရည်အချင်းနှင့်ပက်သက်၍ ( credentials) အမှန်ဖော်ပြခြင်းမရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အများဆုံးသူတို့ လုပ်ကြံပြောဆိုဖော်ပြနိုင်သည့်အရာများကို ဖော်ပြပေးလိုပါသည်။
- ၂၀၁၅ တွင် tertiary qualifications နှင့်ပက်သက်၍ ၆% ကို အတည်မပြုနိုင်ကြောင်းကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါသည်။
အလုပ်ရှာဖွေသူအများအပြားသည် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းတွင် ဖြေဆိုခဲ့ရသည့် ဘာသာရပ်များကို ပြောင်းလဲပြီး သူတို့ကို ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် impressive ဖြစ်သော သင်္ချာ နှင့် သိပ္ပံဘာသာရပ်များဖြင့် အစား ထိုးလေ့ရှိကြပါသည်။
- ES သည် ၂၀၁၅ တွင် Candidate များ၏ Certificate မှန်ကန်မှု၏ ၂၀% ကို အတည်မပြုနိုင်ခဲ့ပါ။
အရင်က အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်း ( Previous Employment)
၁. မမှန်ကန်သော roles နှင့် responsibilities များကို ဖော်ပြရန်
၂။ အရင်အလုပ်တွင် ရာထူးကြီးကြီးဖြင့် လုပ်ကိုင်သကဲ့သို့ ဖော်ပြရန်
၃။ အလုပ်ပြောင်းရသည့်အရာနှင့်ပက်သက်၍ မှားယွင်းသော အကြောင်းပြချက်ကို ပေးရန် နှင့်
၄။ လစာအဟောင်းနှင့်ပက်သက်၍ ပိုမိုဖော်ပြခြင်း( လက်ရှိရသည်ထက် နှစ်ဆအထက် ပိုမိုဖော်ပြခြင်း) တို့ကို ပြုလုပ်ရန် အားထုတ်ကြပါသည်။
ထင်ရှားမှုအနေဖြင့် အလုပ်ရှာဖွေသူများသည် ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပက်သက်၍ ၂၃%၊ Computer skill နှင့်ပက်သက်၍ ၁၆%၊ မြန်မာစာ typing ရိုက်ခြင်းနှင့် ပက်သက်၍ ၂၁% ၊ ကားမောင်းကျွမ်းကျင် ခြင်းနှင့်ပက်သက်၍ ၅ % စသဖြင့် skill များကို မိမိကျွမ်းကျင်မှုထက်ပို၍ ချဲ့ထွင်ဖော်ပြကြသည်။
Cover Letter Characteristics- အပေါ်စာနှင့်ပက်သက်သည့် လက္ခဏာများ
အင်တာဗျူး ၊စမ်းသပ်ချက်များနှင့် Online Cross-checked မှ တဆင့် တိုင်းတာထားသည့် ဝန်ထမ်းများမှ၂၆% သည် သူတို့လျှောက်လိုက်သော အလုပ်များ၏ Job Description နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် အမှန်ကိုမဖော်ပြဘဲ ပြောင်းလဲ တင်ပြကြသည်။
လိုအပ်သော personality characteristic နှင့် aptitude abilities vs CVs
ကျွန်ုပ်တို့သည် Recruitment Candidate Assessment Software မှ တဆင့် personality characteristic နှင့်သိမြင်ခြင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များ( cognitive abilities) များကို မှန်ကန်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပြီး အလားအလားရှိသူ နှင့် သင့်လျော်မှုမရှိသောဝန်ထမ်းများ ကို ချက်ခြင်း ခွဲခြားနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် candidate များကို Client များသို့ မိတ်ဆက်ပေးရန်သာမက ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် candidate အတွက် လိုအပ်သော tranining လိုအပ်ချက်အဖြစ်ပါ ၄င်းကို အသုံးပြုရန် ထောက်ခံလိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၄င်းသည် ES ကုမ္ပဏီများအတွက်သာမက အလားအလာရှိသည့် အလုပ်ရှင်များအတွက် အချိန်ကိုသာမက ငွေကို ပါ သက်သာစေပါသည်။ CV ပေါ်အခြေခံပြီး potential candidate အဖြစ် ရွေးချယ်ထားသူများကို test အားဖြေဆိုခိုင်းပြီးနောက် ၄င်းတို့ထဲမှ၆၈% ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့် လုံးဝမကိုက်ညီသည်ကို တွေ့ရသဖြင့် ထိုသူတို့ကို ဖြုတ်ချခဲ့ ရပြီး ၄င်းတို့ထဲမှ ၂၀%သည် အရင်အလုပ်များတွင် သူတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပက်သက်၍ချဲ့ထွင်ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
မှားယွင်းဆိုးဝါးစွာ ဝန်ထမ်းခန့်အပ်ခြင်း၏ အကျိုးဆက်များ
အသစ်ဝင်လာသူအများစု၏ background ကို သေချာစစ်ဆေးသင့်သည်ဟု အလုပ်ရှင်များကို ကျွန်ုပ်တို့မှ အကြံပေးလိုပါသည်။ မှားယွင်းသော ဝန်ထမ်းများခန့်အပ်ခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် တခြားသော toolsများနှင့် တိုင်းတာမှုများကို ထောက်ခံပေးလိုပါသည်။ တကယ်အရည်အသွေးမပြည့်ဝသော ဝန်ထမ်းများအားခန့်မိခြင်းသည် ထိုသူများသည် ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်မလုပ်နိုင်ဟု အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သကဲ့သို့ လူကြီးမင်း၏ ထုတ်ကုန်စွမ်းအားကိုလည်း ထိခိုက်ပြီး ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုကိုလည်း ဖြစ်စေပါသည်။
Warning! The average CV contains more lies than you'd ever imagine
Our partnering Executive Search (ES) company was running background screening of candidates during the interviews and by testing them with our new Recruitment Candidate Assessment Software during 2015-2016 years. Based on that, we have prepared some statistics about the prevalence of CV fraud in Myanmar. These statistics have shown that Myanmar job seekers are not always very truthful and trustworthy group of people. Plus they putalot of incorrect, unverifieable information to their CVs.
It appears that job candidates lie about their credentials more than ever before. Here you are the sections they fabricated the most:
Certificates (all kinds)
- A lot of jobseekers changed the name of the subjects they matriculated with. They replaced the subjects with more impressive subjects like Business Management or HR management.
- The ES couldn’t confirm the authenticity of 20% of the candidates’ certificates in 2015.
Job seekers strived to:
- mention incorrect roles and responsibilities,
- inflate job titles in their previous jobs
- provide false reasons for wanting to change jobs,
- exaggerate their previous salary numbers (many times for more than double).
- 6% of stated in the CV qualifications that were checked in 2015 were unverifiable
Significant number of jobseekers overstated their language skills (23%), their computer skills (16%), typing skills in Myanmar language (21%), driving skills (5%).
Cover Letter Characteristics
26% of measured (interviewed, tested and online cross-checked) candidates has altered untruly their Cover letter to match the job description of the job they apply for.
Required personality characteristic and aptitude abilities vs CVs /Resumé information
We have crosschecked the personality characteristic and cognitive abilities through the Recruitment Candidate Assessment Software and thus we were able immediately after to identify „high potentials“ and „not matching“ candidates. Thus we recommended in many cases not to even introduce the candidates to clients or recommendatraining needs for candidates to work on. So we save the money both to ES companies plus potential employers time and money. There were 68% of „potential“ candidates Based on CV immediately refused after tests asacomplete mismatch. Out of that number another 20% exaggerate (manipulate) their accomplishments in previous jobs.
Consequences ofabad hire:
We would advise that employers should do careful background checks for most of the newcomers. In order to avoid hiring the wrong candidates, another tools and measures are highly reccommended.. Hiringacandidate that is not properly qualified will mean that they won’t be efficient, your productivity will suffer and you may suffer financial losses too.
Do you really wantaliar working for you? Fet great Candidate Assessment Software (CAS) to help you to avoid big financial loses, disappointments and frustrustion. It helps you to pre-evaluate all your candidates either found from Executive searches or through online Job portals. It is really worth of money invested to your future and helps you to retain the high potentials.Employers in Myanmar uses CAS predominantly in the hiring process but also for development purposes.
We have samples and FREE trials for you to become future partners in Candidates Assessment Software tool, now available in Myanmar.
Call our sales consultants at Tel: +95 973129906 Tel: +95 9252172944 or write to us at roger@rogerquest.com to learn more.